Rehefa mampiasa browser ianao dia manaova fangatahana amin'ny mpizara mpanjifanao ny mpizara anao ary mandefa rakitra miverimberina ilay mpizara anao ary mampiseho pejy web misy azy. Ahoana anefa raha tianao hiresaka amin'ny mpizara hafa fotsiny ny mpizara anao? Izany dia mitaky anao hanao programa kaody amin'ny API. Midika inona ny API? API dia fanafohezana ny Application Programming Interface. Ny API dia andiana fahazarana,